Ingabe uyilungele i-Chusky ezethembayo? - Izinhlobo
Ingabe uyilungele i-Chusky ezethembayo?
I- UChusky kungahle kube yisikhunta esisheshayo oke wasibona. Ukuhlanganiswa kweChow Chow neSuserian Husky, lolu hlobo oluhlanganisiwe olunesibindi ngokuyisisekelo ngumcamelo wokuhamba.
Ungahle uzwe amanye amagama ambalwa we-Chusky, kufaka phakathi UChow Husky, uHusky Chow, noChowski.
Hlangana noLuna, u-ginger Chusky emi ebhentshini ebukeka emuhle - Umthombo wesithombe
Okukhulu futhi okuphetheyo, ubuntu bukaChuskies bufaniswa nosayizi wabo kuphela. Qhubeka ufunde ukuze ubone ukuthi ungayisingatha yini imvelo yabo enesibindi!
Izinja zeChusky 101
Ngabe ukuhlanganiswa kweChow Chow Husky kubukeka kanjani?
Ingabe i-Husky Chow mix inja yomndeni enhle?
Ukunakekela inja yakwaChusky
Izinkinga zezempilo zenhlanganisela yeChow Chow yaseSiberia Husky
Ibiza malini umdlwane kaChusky?
Ubuhle nobubi bokuthola ukuxubana kweChow Chow Siberian Husky
Izinhlobo ezifanayo zeChusky
Ingabe i-Chow Chow Husky Mix ingifanele?
Njengezinja eziningi zabaklami, kunolwazi oluncane ngemvelaphi yeChusky. Ukuzalisa ngenhloso kungenzeka kwaqala eNyakatho Melika ekuqaleni kwawo-2000. Asazi okuningi ngaphezu kwalokhu, noma kunjalo.
Izinhlobo zabazali bakaChowski zombili zaziwa ngobuhlakani obungaphezu kwesilinganiso kanye nomuzwa oqinile wokuthembeka.
Kuyacaca ukuthi abafuyi babenethemba lokuzihlanganisa bese benza i- inja yokugada ekhaliphile. Ijazi lomzimba likaChow Husky liyibhonasi nje eyengeziwe.
Ukurejista kokuzala neAmerican Kennel Club kugcinelwe izinja ezihlanzekile, kepha ezinye izinhlangano ziyayibona inhlanganisela yeChow Chow Husky.
Lokhu kufaka phakathi I-American Canine Hybrid Club (ACHC), Inja Registry yaseMelika (DRA), kanye I-International Designer Canine Registry (IDCR).
Njengoba singenawo amaqiniso amaningi abandayo, anzima ngokuthi ivelaphi iChusky, ake sazi lolu hlobo oluxubekile ngokuhlangana nabazali balo.
I-Husky yaseSiberia: inja eboshwe ngesithunzi
USuserian Husky ensimini eneqhwa ebusika
Lapho ucabanga nge- USuskyan Husky , mhlawumbe ubona ngeso lengqondo amaqembu amaHuskies edonsa izihlibhi ezinqamula amabanga amakhulu eqhwa. Futhi awunaphutha!
AmaHuskies aqale eSiberia, lapho abantu bomdabu baseChukchi babazala khona ama-sled pullers nezinja ezisebenzayo.
Kuyathakazelisa ukuthi amaHuskies nawo abonwa njengabangane. Abesifazane nezingane babevame ukunakekela la ma-canine anesibindi. Kucatshangelwe ukuthi lokhu kuhlanganiswa kwepakethe kusenesikhathi kube nomthelela ku-Husky's umoya ogxile emndenini.
Kusukela lapho, abakwaHuskies bathole idumela lokuncintisana kwabo nezici zabo ezi-quirky. Wake wayizwa inkulumo kaHusky? Isici sabo awoo ingenye nje yezici eziningi eziphawulekayo zalolu hlobo!
Yazi iChow Chow
Izinwele ezinkulu ezibomvu, iChow Chow
Kukholakala ukuthi ingenye yezinhlobo zezinja ezindala kunazo zonke emhlabeni, i- Chow Chow kungenzeka ukuthi bezulazula emhlabeni kusukela ngo-150 BC.
Lezi zinja zasebukhosini zisebenze izinhloso eziningi eminyakeni edlule. I-Chow Chows inayo bayazingelwa, badonswa, futhi bagcina nokubuka kwabase-China abasezingeni eliphezulu!
Ekhuluma ngobukhosi, iNdlovukazi uVictoria uqobo yakhe wayithanda kakhulu iChow Chow. Kungekudala ngemuva kokuthi uChow ejoyine umndeni wasebukhosini baseNgilandi, lolu hlobo lwabona ukuthandwa okwandayo e-United States.
I-AKC yalubona ngokusemthethweni lolu hlobo lwezinhloso ezehlukene ngo-1903. Bebelokhu beyisisekelo emakhaya athanda izinja kusukela lapho!
Kuthiwani uma ungaba noHusky ophuzi, onjengefu? Lokho kuhle kakhulu ozokuthola ngeChowski.
Ngokungafani nama-purebreds, noma kunjalo, kuyaqabukela kunesilinganiso sohlobo lwezinja ezihlanganisiwe. Ukuthi iChusky yakho izobukeka kanjani isethubeni ngokuphelele.
Ebuntombini, iChowski yakho ingahle ifane ne- ukuhamba nge-teddy bear. Imidlwane ye-Chusky ivame ukuba nezindlebe eziyindilinga eziye zikhonjiswe kancane kancane ngokuguga.
UChusky wakho angaba nemilenze emide, noma angahle abe mfushane futhi aqine. Ikhanda lakhe nesifonyo sakhe cishe kuzoba banzi njengeChow Chow, yize isifonyo esinde sikaHusky sihlale sikhona.
Ngokuya ngokuthi yiluphi uhlobo lomzali abaluthathayo, iChusky ingahle ibe namehlo ansundu, aluhlaza okwesibhakabhaka noma we-hazel. Lezi nzalo zingaba nazo i-heterochromia , futhi, nakuba kungavamile.
Hlangana namazambane, uChowsky onamehlo ansundu - Umthombo wesithombe
UChow Husky wakho naye angazuza njengefa lobuso obuminyene bomzali wabo weChow Chow. Lungiselela umug ojabulisayo we-squishy!
Ukubukeka kweChowski akuyona yonke into emnandi nemidlalo, noma kunjalo. Ngezinyawo zawo ezine-webbed kanye nezifuba zemigqomo, lawa ma-canine eyakhelwe isenzo nomthelela.
Usayizi: Iba nkulu kangakanani iChowskis?
IChowskis isindekile, iphakeme, iphakeme. Lapho usumdala, inhlanganisela yeChow Husky ivame ukuba nesisindo Amakhilogremu angama-40-65 (18-29 kg) futhi ifinyelela Amasentimitha angu-18-23 (46-58 cm) ukuphakama.
Ezinye zingaze zibe ngamasentimitha angama-69 ubude! Akudingeki ukusho, lokhu kuxubana akakhelwanga izigaxa zethanga.
Futhi awawafanele amakhaya amancane. Phakathi kwesiqu sabo namandla abo aphezulu, igceke elibanzi kufanele.
Umbala wejazi: Yini ongayilindela kuChusky?
Ngobuzali babo beChow Chow kanye nabaseSiberia Husky, ingxube yakho yeHusky Chow yenzelwe i- ijazi elimbili elijiyile.
Ngokuvamile banezinwele ezimfushane, eziqondile. Banokuningi nje.
AmaChuskies eza ngemibala ehlukahlukene. Okwakho kungaba ngumthunzi owodwa oqinile noma inhlanganisela yama-hues. Imvamisa, sibona iChowskis nge onsundu, omnyama, ukhilimu, obomvu, noma omhlophe uboya.
Isikhathi sokuqala ukuba ne-canine? Ungazithola udlulwa yiChusky.
Ngokuzethemba okungokwemvelo, le nja eyi-hybrid ayisho lutho ngaphandle kokudonswa. Ngisho nabanikazi bezinja abanolwazi, uHusky Chows angaba yinselele.
IPurebred Chows idume ngokungabi nabungani. Uhlangothi lwabo olumnandi lubekelwe umndeni kuphela. Izinhlobo zofuzo zikaSuserian Husky ziyayithukuthelisa le mfanelo eChowskis, kepha ubuntu babo busalokhu busohlangothini lwengozi engaziwa.
Hlangana no-Archie, uChusky ohehayo emamatheka ngenkathi ebeka amaqabunga okuwa - Umthombo wesithombe
Yize lokhu kungakhombisi okuhle kubazali bezilwane ezihamba phambili zenhlalo, kuyakunika umlindi ongahlulwa.
Ngeke nje iChow Husky cross yakho ivikele ipakethe yabo, kodwa futhi bazosebenzisa izwi labo le-doggie ukuqinisekisa ukuthi wonke umuntu ose-3-block radius uyazi ukuthi kunengozi ezokwenzeka.
Ukuqeqeshwa kusenesikhathi kunganciphisa– kepha hhayi ukuqeda -Ukukhonkotha ngokweqile. Uzophinde ufune ukugxila emizamweni yakho ekuqeqeshweni kokulalela nakwezenhlalo.
Kuyindida ukuthi iChowskis ihlakaniphe ngokwanele futhi isebenza ngokwanele ukwenza kahle emisebenzini ye-canine. Okwabo imvelo ebusayo, enenkani kunciphisa ukuqeqeshwa kwabo, noma kunjalo.
Thembela ekuqiniseni okuhle, futhi khumbula: ngaso sonke isikhathi gcina ukuzola kwakho. Ungayiniki le pooch engathandeki ukwaneliseka kokwazi ukuthi bathole okungcono kakhulu kuwe.
Ukungaguquguquki kungenye into ebalulekile yohlelo lokuqeqeshwa lukaChowski. Le hybrid ivame ukuba ne- ukushayela okuqinile futhi kungaba yisiqhwaga kwezinye izilwane.
Ngakho-ke, ukuqeqeshwa kwabo kanye nokuhlangana kwabo kufanele kuqale ebuntwaneni futhi kuqhubeke kuze kube seminyakeni yabo yobudala.
Ngomnikazi ofanele, ngisho noChusky onenkani kakhulu angaba yisilwane esikhulu somndeni. Nge-novice, noma kunjalo, ubumnene beChowski bungaba kakhulu ukuphatha.
Uma ukhuluma ngemindeni, uma unezingane, qiniseka ukuthi ziyakwazi ukufunda ulimi lomzimba lwe-canine.
UChusky wakho ulindele ukuthi imingcele yabo ihlonishwe ngaso sonke isikhathi. Ngokuya ngosayizi namandla abo, kungokwesifiso salo lonke iphakethe ukwenza ukuqeqeshwa kube yinto yomndeni.
Qaphela, isibonelo, indlela emnandi ngayo iMinie umdlwane wakwaChowski nezinye izinja epaki.
Inhloso yakho njengomnikazi weChusky kufanele kube ukuhambisa ukuzimela kwabo futhi ubafundise ukuthi bangasho kanjani ukuthi 'abekho abangane abasha, ngiyabonga' ngendlela ehloniphekile.
Noma iChowski yakho kungeyona inja ethandwa kakhulu emhlabeni, ungangabazi ukwethembeka kwabo noma uthando.
UHusky Chows uzinikele kakhulu, kunjalo ithambekele ekukhathazekeni ngokwehlukana lapho bengekho emaphaketheni abo. Bazojabula kakhulu ekhaya elinobuholi obuqinile, ukubekezela okuningi, kanye nengcebo yesikhathi samahhala.
Uma ungakhathazeki ngokuzijabulisa eqhweni futhi ubone ukuzilungisa njengokuzivocavoca umzimba, lokhu kungaba yinhlanganisela yakho nje!
Ngoboya babo obukhulu, iChowskis ungenzi kahle emazingeni okushisa aphezulu kodwa uzizwe usesekhaya lapho kupholile. Zibuye zibe nokugcinwa okuphezulu uma kukhulunywa ngokunakekelwa kwengubo nokuzivocavoca umzimba.
Ukuzivocavoca: I-Chusky idinga ukusebenza kanjani?
Ukuvivinya ukuxuba kwakho kweHusky Chow akuyona into encane.
Lezi zidingo ezinamandla zidinga okungenani ukuhamba ngamandla noma ukugijima okukodwa kwemizuzu engama-60 usuku ngalunye. Couple lokhu ngezikhathi ezimbalwa zokudlala nokuhamba okufushane futhi uChusky wakho uzoba umdlwane owodwa ojabulayo!
Ngenxa yezinga lamandla abo, lolu hlobo oluxubekile akuyona inketho engcono kakhulu yamazambane asembhedeni, abantu abadala, noma abanikazi abanezinkinga zokuhamba. Uma izidingo zabo zokuzivocavoca zingatholakali, iChowskis ingasheshe ibe yingozi.
Abanikazi abakhuthele, noma kunjalo, bazoyithokozela le nja enamandla.
IHusky Chows yenzelwe noma yini: ukugijima, ukuhamba izintaba, ukushesha, i-flyball, ukuhamba ibanga elide olwandle - ungakusho nje!
Noma ungatholi iqhwa njalo, ungangena efeni lakho lenja yesihlibhi yeChowski. Bafundise ukudonsa izinqola ezincane noma izinqola ukuze banikeze imizimba yabo nobuchopho ukuzivocavoca okuhle.
Hlangana noMelody, uChowski othanda iqhwa ehleli engadini - Umthombo wesithombe
Kufanele ngondle kangakanani iChowski yami?
Ukusetshenziswa kokudla kuyahluka ngeChusky ngayinye, kepha hlela ku 3-4 izinkomishi ngosuku, ihlukaniswe kabili ukudla.
Njengoba amaChuskies ethambekele ekutholeni isisindo, anamathela esimisweni sokudla, futhi ugcine izinsalela zetafula (isilingo esingephikiswe) lapho zingafinyeleli khona.
Ukudla kwezinja okwenzelwe izinja eziphakathi nezikhulu kungumbono omuhle weHusky Chow. Uzophinde uthande ukucabangela iminyaka yabo, impilo, izinga lomsebenzi, kanye namazinyo amaningi.
Yebo, ufunda lelo lungelo. Amanye amaChusky azalwa engenamazinyo. Ngokuya ngamasethi azo okushisa, ukudla okomile kungaba nzima kakhulu ukuhlafuna, okwenza inja emanzi chow ibe yisidingo.
Ingabe izinja zeChowski zidinga ukuzilungisa okuningi?
Impendulo yalo mbuzo inguyebo ocacile
Phakathi kwezimbuzi zabo zeChow Chow kanye nokuchithwa kwezinga likaHusky, amaChuskies yiwona okuphambene ne-hypoallergenic.
Lona uBarney, uChowski ocwilayo ngemuva kokuzilungisa - Umthombo wesithombe
Ukuxubha nsuku zonke kungcono kakhulu kulesi sichitho esinzima. Qhubeka uqoqe okubalulekile manje. Uzodinga ibhulashi lephini, isheduli, nesikele esiqinile se-Husky Chow yakho.
Kufanele futhi uhlole izindlebe zakho zeChusky bese uxubha amazinyo abo nsuku zonke .
Izipikili ze-Nail zidinga ukwenzeka kuphela kanye noma kabili ngenyanga ngokuningi. Bheka izinzipho zikaChowski. Uma ziqala ukubukeka njengamazipho noma uma uzwa uFido echofoza phansi, sekuyisikhathi se-pedicure.
Njengoba unikezwe isimo se-Husky Chow esimangazayo, uzofuna ukubenza bangazweli enqubweni yokuzilungisa kusenesikhathi.
Ikakhulukazi uma uhlela ukucela usizo lomkhongi oqeqeshiwe, ingane yakho kufanele ikhululeke ngangokunokwenzeka ngokuphathwa nokwenza ubuhle.
I-Husky Chows, ngiyabonga, uhlobo oluhle kakhulu. Isikhathi sokuphila esilinganiselwe sale pooch siyinto enkulu Iminyaka engu-10-14!
Kepha alukho uhlobo olungenazo izinkinga zalo zempilo, okuthusa kakhulu umthandi wezinja.
AbakwaChusky bangahlangabezana nakho izindaba zokuphefumula uma ubuso babo bufiphele ngokukhethekile. Futhi izinkinga zamehlo , kufaka phakathi i-cataract ne-entropion, nakho kungenzeka kweChusky.
Yize lezi zingazwakala zinzima, i-cataract ingaphazamisa umbono wenja yakho njengoba ikhula. I-Entropion , Isimo esenza ukuthi ijwabu leso lisonge ngaphakathi, kungaba buhlungu impela. Kokubili lokhu kudinga ukuhlinzwa ukuze kulungiswe.
Izinkinga ezihlangene kungenye yezinkinga zezempilo. Izinhlobo ezinkulu ezinjengeHusky Chow zisengozini ye-hip dysplasia futhi patellar ukunethezeka .
Uma uChowski wakho eqala ukuhamba exhuga noma egijima kuphela ngemilenze emithathu, bangenise kudokotela wezilwane ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuze ugweme noma yiziphi izinkinga zesikhathi eside.
Hlangana noGinny, umdlwane omuhle kaChusky - Umthombo wesithombe
Intengo yangempela yokuba nomdlwane weChowski incike ezintweni eziningana.
Ukuthenga i-Chow Chow Siberian Husky mix puppy kuzokubuyisela emuva $ 500-1000. Yenza ibhajethi enye i- $ 1500 noma ngaphezulu ngezindleko zokugcina zonyaka, kufaka phakathi ukunakekelwa kwezokwelashwa nokunikezwa.
Unganciphisa izindleko ngokwamukela kunokuthenga esitolo sezilwane. Ukuthenga i-pup enempilo kumfuyi onedumela nakho kungakongela imali ezindlekweni ze-vet zesikhathi esizayo.
Ake sihlole zombili izinketho ukuze ukwazi ukuthatha isinqumo unolwazi.
Ukukhetha umfuyi weChow Chow waseSiberia uHusky
Ukusesha kwethu umfuyi weChusky akuzange kuveze imiphumela eminingi. Ungahle udinge ukwenza okunye ukumba ukuthola umfuyi othembekile eduze kwakho. Kepha ngalezi zeluleko, uzobe usulungele ukuthatha i-leap lapho uthola umdlalo ofanele.
Abazalisi abahle kakhulu bobabili banolwazi futhi banokuqonda. Bafuna ukuqinisekisa ukuthi amazinyane abo aya ekhaya elihle. Akuvamile ukuthi abalimi babuze imibuzo mayelana nendlela yakho yokuphila nesipiliyoni sokukhulisa izinja.
Kufanele futhi ubuze eyakho imibuzo.
Cela iziqinisekiso zezempilo kanye nobufakazi bokuhlolwa kofuzo kumfundi wakho wakusasa nabazali bakhe. Uzophinde ufune ukuhlela isikhathi sokwazi imidlwane yomfuyi.
Funa umdlwane kaChusky osebenzisana ngokukhululeka nabantu abasebenza ngodoti nabantu. Ufuna i-pooch enokuzethemba engekho nokhahlo noma enamandla.
Umdlwane kaHusky Chow obonakala esaba noma enenhloko yezinkunzi kungenzeka angakulungeli, ikakhulukazi uma unezingane noma ezinye izilwane ezifuywayo.
Ukwamukela iChowski endaweni yokutakula noma yokukhosela
Lokhu kungabonakala njengokuphikisana, kepha ungaba nenhlanhla engcono yokuthola iChusky yokutholwa. Kepha njengazo zonke izinto, ukuhlenga umdlwane kuza nezixwayiso ezimbalwa.
Kufanele wazi ukuthi izinja zivame ukuza ezindaweni zokukhosela nge imilando engaziwa. Kuzoba nzima ukusho ngokuqiniseka ukuthi i-pup yakho i-50/50 Chow Husky split. Cabanga nje ngenja yakho yokukhosela njenge-medley yezinhlobo ezimangalisayo!
Kubalulekile ngokulinganayo ukuqaphela ukuthi imidlwane yokutakula kwesinye isikhathi ingaba nezinkinga zokuziphatha.
Ngeke wazi ukuthi baphila ngaphansi kwaziphi izimo noma ngabe banikezwe ukwakheka okunempilo ekhaya labo lokugcina. Gcina lokhu engqondweni lapho usebenzisa i-Husky Chow yakho.
Buza nezinhlangano zosizo zeHusky neChow ukuthola ithuba elingcono kwiChowski yangempela. Bangakusiza futhi ukukufanisa neChusky yesimo esifanele. Nazi izindlela ezimbalwa ongazisindisa:
Ukutakula kweChow Chow kweCentral New York, Inc. (IBrewerton, NY)
Ukuxhumana kweHouston Chow Chow (IHouston, TX)
Ukukhululwa Komoya Okukhululekile (IHarvard, IL)
IHusky House (IMatawan, NJ)
Manje njengoba uhlangane nabakwaChusky, ake sifingqe okulungile nge-‘em… hhayi okuhle kangako.
UHusky Chows kukhona uzinikele futhi uyazivikela. Bazokugcina uphephile nomndeni wakho.
Banokubukeka okuhlukile nengubo efana nefu.
AmaChusky aqinile futhi anamandla– ephelele abasubathi!
AmaChowskis anethezekile emindenini emikhulu, ikakhulukazi lapho lonke iphakethe liqondiswe enjeni.
Chow Chow Huskies kukhona ukugcinwa okuphezulu maqondana nokuzilungisa, ukuqeqesha, nokuvivinya umzimba.
Lezi zinja zaziwa ngokuchitha kanzima. Akuzona izinqumo ezinhle zabanikazi abajwayele ukungezwani komzimba.
AmaChuskies kungaba nzima ukuhlangana. Amakhaya anezingane ezi-rambunctious noma ezinye izilwane ezifuywayo kufanele qhubeka ngokuqapha.
Akuthengiswanga ngokuphelele kuChowski? Lokho kuyaqondakala. Lesi isiphambano esingenakulibaleka, ngaphandle kokungabaza, kepha ngeke kube ukulingana okuhle kwepakethe ngayinye.
Uma uhlangothi lwabo lukaHusky luthandeka kuwe, cabanga nge- UPitsky noma I-Huskador .
Ungahamba ngisho ne-purebred efana ne-Husky efana ne-purebred, kodwa I-Alaskan Malamute !
Uma uthanda isimilo esiqinile seChow kodwa udinga ukusibeka phansi, hlola ifayela le- I-Chabrador noma Chowtriever .
Hlangana no-Kodi, uChow Husky onolwazi - Umthombo wesithombe
IChusky izibona njenge- inja ye-regal alpha. Awusoze wakhathazeka ngokuzethemba okuphansi ngale pooch ezethembayo!
Ngenxa yobuntu babo obunesibindi, iChowskis idinga abanikazi abanayo isipiliyoni ngezinhlobo zethusi nokunikezwa okungapheli kokubekezela.
Ezandleni zomnikazi wezinja ongafanele, zingaba yingozi noma zibe yingozi kakhulu.
Ingabe ungumnikazi weChusky ophelele? Sitshele ukuthi kungani kumazwana!
Ngabe i-German Shepherd Malamute ixubene kahle?
Ukuzala Kwenja E-Samoyed: Umhlahlandlela Kulaba Bangani Abanobungane
Amagama Welebhu Yoshokholethi: Uhlu Lwamagama angama-500 + ahamba phambili namagama adume kakhulu
Umalusi Othembekile, Osebenza Kanzima waseDashi Ungumlingani Wakho Ohamba Phambili
I-Golden Retriever Pitbull Mix - Okudingayo ukwazi
Kungani Izinja Zikhefuzela? Isayensi Elandela Izinja Zikhefuzela
Amagama Enja Emhlophe angama-300 + - Khetha Igama Elihle Kakhulu LePuppy Emhlophe
Inja yaseNtabeni yaseCaucasus: Umlondolozi ohlakaniphile, othembekile
Amagama kaPitbull: Ama-250 + Amagama Aphelele Nadumile SIWATHANDA ama-Pitbulls
pics of poodles inkomishi yetiye
isigamu rottweiler isigamu umalusi waseJalimane
ukuxubana kwe-shih tzu ne-chihuahua
amagama apholile ezinja ezincane
Kusho ukuthini lapho inja yami ikhotha izidladla zayo